मनसुन सक्रिय भए पछि मुलुकले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्दै, ८८ को मृत्यु, ३२ बेपत्ता ! कुन जिल्लामा कतिको मृत्यु भयो र कहाँ कस्तो छ अवस्था ? पुरा पढ्नुहोस ! – live 60media
मनसुन सक्रिय भए पछि मुलुकले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्दै, ८८ को मृत्यु, ३२ बेपत्ता ! कुन जिल्लामा कतिको मृत्यु भयो र कहाँ कस्तो छ अवस्था ? पुरा पढ्नुहोस !
← केतुले गर्दैछ राशि परिवर्तन, यी ७ राशिको लागि हुनेछ अत्यन्त शुभ !
सूर्य भगवानको पूजा गर्दा यो मन्त्र जप्नाले हुन्छ फलिफाप →